हाँसेको तस्वीरमा मन रोएको परदेशीको दशैं सन्देश « Postpati – News For All
हाँसेको तस्वीरमा मन रोएको परदेशीको दशैं सन्देश
सबै भन्दा पहिले पोष्टपाटी परिवार, मेरो घर पुतली बजार नगरपालिका ४ नौ डाँडा निवासी मेरो जिबनसंगिनी, छोराछोरी, मेरा पुजनिय दाजु भाउजू, प्यारा छोरा छोरी, ज्वाइँ, नाति, सासू आमा, दाजु, भाइ फेदी खोला गाउँ पालिका निवासी मामा माइजू, भाइ बहिनी र मलाइ यम प्रसाद पोख्रेल भनेर चिन्नु हुने सम्पुर्णमा बिजयदशमी तथा शुभ दिपावलीको मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु । म यो दशैँमा आउन पाइन । अर्को दशैंमा अबसय आउने छु ।
याम प्रसाद पोख्रेल
पुतलीबजार नगरपालिका ४ नौ डाँडा, स्याङ्जा
सबै भन्दा पहिले पोस्टपाटी परिवार, मेरो अर्घाखाची छत्रदेव गाउँपालिका वडा न. ३ बास्पाटा निवासी मेरा बाबाआमा , जीवन संगिनी मन्जु, दिदी भिनाजु, भान्जा भान्जी, मेरा हितैसी साथी, सङ्गिनी अनि मलाइ बिराज पाण्डे भनेर चिन्नु हुने सम्पुर्ण आफन्तजन र एकिकृत जनक्रान्ती मार्फत बैज्ञानिक समाजवादी राज्यसता स्थापनाको महा अभियानमा लामबद्ध क्रान्तिकारी साथीहरुमा बिजयादशमीको शुभकामना व्यक्त गर्दछु । बाध्यताले यो दशैँ परदेशमा बिते पनि अर्को दशैं घर आउने छु ।
छत्रदेव ३ बास्पाटा
परेदेशमा छु । तर पनि आफ्नो गाउघर, आफ्नो मातृभुमी, आफ्नो चाडवाडलाई माया मार्न पटक्कै सकेको छैन । आफ्नै देशमा दस नङ्ग्रा खियाएर स्वाभिमानी बन्छु भनियो सकिएन । जे जति दुःख गर्दा पनि दुःखबाट सुखमा परिवर्तन भएन ।
न रहरको पोको फुक्यो न सपनाको । नत्र को हिंड्छ काखको सन्तान र तीन बीस उमेर कटेका बाआमा छाडेर परदेशमा ? म पनि आईपुगें मलेशिया । पाँच वर्ष भो कि भदौबाट पाँच पुगेर छ लाग्यो परदेशिएको । तीतामिठा सपना र आशा बोकी मानसिक पीडाबचि बस्नपर्दा अघिल्लो जुनिको पाप काट्दै गरेको जस्तो लाग्छ ।
काममा कहिले सुख कहिले दुःख, कहिले हप्की र कहिले साहानुभुती नियमित हो । हिजो मात्र छोरीले फोनमा लामो श्वासशमा बाबा हजुर कहिले आउनु हुन्छ ? तल्ला घर्को अंकल अनि माथिका ठुल्बुबाहरु आइसके । हजुर मात्र हो आउन बाकी भनी ।
उसलाई कउष्ल भयको ट्याब मनपरेको छ । ठूलो क्याट्बरी चकलेटको स्वाद सम्झिएकी छे । बाबा जाँदा म सानी थिएँ, अहिले ठूली भएँ भन्छे । लुगा किन्न मलाई सिकाउने भैसकेकी छे । बाहिरबाट पठाएको नाना ठीक नभएकोमा उसको चित्त दुखाई पनि छ ।
बेरोजगारीको हत्कडी फुकाउन यस्तो सजाय पाउनेको सूचीमा धेरैजस्तै म पनि छु । अभावको माखेसांलो चुँडाल्न आएको हूँ, त्यसैले सहनु कर्म र धर्म रहेछ । म जस्तो हरेक परदेशी नेपालीको दुःख, पीडा र ब्यथा मेरो भन्दा फरक होलान्, वा कम होलान् वा बढी होलान् । तर घरपरिवार र आफ्नो जन्मभूमिको यादमा आउने भावनाको र बग्ने आसुको रंग र स्वाद चाँहि पक्कै एउटै हुन्छ ।
यो पाली पनि दसैमा छुट्टी हुदैन । भाइसाथी मिलेर खसी किन्ने निर्णय भएको छ । टीकाचाँहि घरबाट बाहिर हिंडेपछि मज्जा लाउँदैन । चाडबाडमा खानपिन चाँहि दुईवटा समूहमा आफैले बनायर खाने गरेको छौ । डिउटी २ सिफ्ट हुने भएकाले दशैं मान्ने पनि दुई टोली बनेको छ हाम्रो ।
कतिले रियाल टिप्नु हुदैछ भने । कतिले दिराम सोहोरिरहेको भन्छन् । कतिलाई रिङ्गेटको रुखमा पसेको छु त्यो रुखले कहिले भुइँमा झार्छ अनि दशं मनाउछु भन्ने बिचारमा छु । बाहिर त हासेको छु । बाहिर हाँसिरहेको तस्वीरमा भित्र के के छ भनेर कोतर्ने केही छैन । बधाई र शुभकामना बराबर छ । जसरी लिन्छु त्यसरी फिर्ता गरिरहेको छु शुभकामना ।
गच्छेअनुसारको ढोग, नमस्कार र हार्दिकता सहित दशैंको शुभकामना
उही वसन्त न्यौपाने सुर्यगढी—५, नुवाकोट (हाल मलेशिया)
म शुद्ध अरबमा छु । परारैदेखि यहीं छु । परिवारसँग केही आश्वासन, रहर र सपनाको बात साटेर आएको । ठूला रहरले होइन, कहरले आइपुगेको हूँ । त्यसैले हरेश दशैंले पोल्छ । यो पाली पनि चाडबाडको गर्जो टार्न घरमुलि बालाइ केही रकम हात पारिदिएँ ।
म एक अबोध बालिकाको बाबू पनि हुँ । उसका सपनाले पनि मलाई अरबमा बाँकि सबै सपना बिर्सन उत्प्रेरित गर्छ । भिडियो कलमा हाउभाउ हेर्छु, तोते आवाजमा घर फर्कदा ल्याइदिनु पर्ने सामानको सूची सुनेर बहकिन्छु । सम्हालिन्छु । अस्ती मात्र मैले फोनमा जिस्काएँ । खिस्साएँं । सँंगसँगै लाडिएँ । घरमा दुईचार जना हाँस्दा दशैं फुलिरहको देख्छु । र, त्यसैमा आफू भुलिरहेको देख्छु ।
लामै समय भैसकेछ क्यार पोहोर सालकै सान्त्वनाका शब्दहरुले आमाको मन नमानेको । आमाको मन भिडियो कलमा पनि स्पष्ट देंखे । मलाई लाग्यो त्यसैले त आमा हुन् । मेरै झै हजार आमाको नमुना पात्र हुन् मेरि आमा । मलाई आमाहरुले बिरह सुसाएको कत्ती रमाइलो लाग्दैन । देशको परिस्थितिले परिवारसँंग पर हुन पर्ने बाध्यताको अन्त्य चाडैं हुनुपर्छ भन्ने पुरानै आदर्श सम्झिएर सम्हालिएँं ।
यस्तै गरी यसैगरी र यिनै विशेषता बोकेर जोर दशै गुजारेको छु मैले । इस्लाम धर्मावलम्बीको बकर इदमा हप्तादिन छुट्टी मिलेको थियो । मुसलमान दौँतरीहरुसंग खानपिन भो । रमाइलो गरियो । तर हामीले खोजेको दशै अरबमा मान्न सकिन्न । धर्म र कानुनको खिलाप ठहरिन्छ !
चासो राख्ने आफन्त अनि केही समिपका साथिसंगी र अग्रजलाइ रेडिमेड सुभकामना सन्देश पठाएर सायद यो दशैको बिट मारिन्छ होला भन्ने थियो !! सबेरै दाइको मेसेजले औधी खुसी मिल्यो । दशैका दस दृश्य छेउछाउ कै एउटा दृश्य र म पात्र पनि सत्य हो भन्नेमा दाइलाइ अझ मनग्ये थाहा छ ।
घरगाउँ र देशका मान्छेहरुलाई पनि दशैंको शुभकामना
परदेशका मान्छेहरुलाई पनि दशैंको शुभकामना ।
उही युबराज नेपाली, अरबबाट
प्यारा छोरा बुहारी, छोरी ज्वाई सवैलाई दशैको शुभकामना
ग्रहण लागेको चन्द्रमाको झैं रात
आधा मुटु तुक्रिंदा पाएनौ कसैको साथ
हाँसो र खुसि खोसिएको थियो हामीवाट
त्यसैले म पुगें माइल टाढा तिमिहरुवाट
टाढा भयौं भनेर नदुखाउनु है मन
तिमीहरु रोयौ भने मेरो मन दुख्ने छ झन
तिमीहरु नै मेरा भविस्यका तारा हौ
मेरो स्वास, मेरो धड्कन अनि मेरा सहारा हौ
पुरयाइदिने छ तिमीहरुको पिताले संधै मनकामना
तिमीहरुको माताको तर्फवाट टाढैवाट भएपनि दशैंको शुभकामना
अम्विका मगर, घोराही नगरपालीका १५ , हाल युकेवाट
अगाडि नै रहेको बिजया दशमी २०७५ को हार्दिक मङलमय शुभकामना !!!!
प्रदेस अनि घरदेश जो जहाँ भए पनि नवदुर्गा ले सदैब रक्षा गरून् । गाउँ हो या बजार दशैंको चर्चा चलिरहेको छ ।
झन्डै १० औं बिजया दशमी मनाउन नपाएको पात्र । टाउकोमा साहुको ऋण, काँधमा जिम्मेवारी अनि देखिएका सुखका सुनौला सपनाहरुलाई पूरा गर्न तल्लिन रहँदा बिते १०औ वसन्त ! हो सबैलाइ रहर हुन्छ चाडपर्वको समयमा प्राय घरमै आफ्नै बाल बच्चा छरछिमेकसंग रमाइलो गरेरै बिताउने बिडम्बना परदेशीलाई त्यस्तो अहोभाग्य कहाँ मिल्छ र ? तोते बोली बोल्दै बाबा दशैमा आउनु है भनेको र बा आमाले बाबू यो पाली त आइज है जसरी पनि भनेको, त्यस्तै आफ्ना दौतरीले साथी यो पटकको दशै बबल हुन्छ, तेरो उपस्थित हुनुपर्छ है भनेको तर यो परदेशीलाई के को दशै ? के को तिहार ? बिहान झिस्मिसेमा उठ्यो, किच्चन छिर्यो जे छिटो पाक्छ, पकायो, पोको पार्यो, ड्युटी हिड्यो ।
अहँ दशै त लाग्दै लागेन । दिउँसो खाना खाने बेला नेपालीको जमघटमा खान लाग्यो । सबैलाई दशैको कुरा आउँछ तर मलाई दशैको कुरा गर्न मन लाग्दैन । सामाजिक संजालमा शुभकामना सन्देशहरु पठाएको देख्दा ओहो दसै कति मज्जाले आएछ जस्तो लाग्छ । मेरो दशैं पनि आउने छ । ती तोते बोल्ने बच्चाहरुको काखमा र ती डाडा पारिका घाम जस्तै बुवाआमा अनि इस्टमित्रहरुसंगै बसेर खेल्दै रमाउने दिन पक्कै आउने छु ।
यो पटक बाध्यताका कठोर पर्खालहरु नाघ्न सकिन । त्यसैले तपाईहरुको हातबाट तिका र जमरा लाउन सकिन । अर्को पटक अबस्य आउने छु । जाँदाजाँदै सवैलाई विजयादशमीको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
लक्षमण जिसी ‘प्रविन’ पाल्पा, हाल साउदी अरविया
देश तथा परदेशमा रहनु हुने समस्त नेपाली दाजुभाई, दिदिबहिनी, बुवाआमा,साथीभाई, इस्टमित्र, शुभचिन्तकहरुमा २०७५ सालको शुभ बिजयादशमी तथा दिपावलीको पावन अवसरमा नवदुर्गा भवानीले सधै रक्षा गरून् । दशैलाई दशैको रुपमा मनाउनु होला । दशै कसैको दशा नबनोस ।
चाडपर्व भन्ने बित्तिकै हामी नेपाली जाडरक्सी खाने, जुवातास खेल्ने पर्वको रुपमा मात्र सिमित छौ। एकापसमा भाईचाराको सम्बन्ध कायम गर्न सकौ । आफ्नो देशलाई सधै माया गर्न सकौ। भ्रष्ट, दलाल प्रवित्ती को अन्त्य होस र छिटै शान्त, समृद्ध र सम्मुनत नेपालको अनुभुती गर्न पाईयोस।
सुरेन्द्र कुमार, हाल युएई
बिजयादशमी, शुभ दिपवली तथा छठ पर्वको पावन अवसरमा समस्त नेपाली दाजुभाइ दिदिबहिनी तथा समस्त परिवारजनमा सुख, शान्ति, समृधि, सु-स्वास्थ एवं दिर्घायुको मङलमय शुभकामना ब्यक्त गर्दछौं ।
सामुहिक युवा प्रयास केन्द्र नेपाल।
सामुहिक युवा प्रयास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था टिम
सबै भन्दा पहिले पोष्टपाटी परिवार अनि मेरो बिदुर नगरपालीका २ बट्टार सङ्गम चोक बस्ने जिबन सङ्गिनि, छोरा उत्सब र उमङ्ग सपरिवार साथै बिदुर नगरपालीका ३ कुमलटार हुनु हुने बुवा, ममि, दाई, भाउजु, मलेसिया हुने सम्भु भाई, मेरा दिदि, भिनाजु, भान्जा भान्जी अनि काठमाडौं हुनु हुने दाई, भाउजु, छोराछोरी, अनि नुवाकोट गेर्खु निवासी मेरा आदरणीय मामा माइजु दाई भाउजु सम्पूर्ण र बिदुर न.पा. ८ राइसिङ निवासी मधु दाई, बिना दिदि र रोशन भान्जा साथै मलई चिन्नु हुने सम्पुर्ण आफन्त, इष्टमित्र, साथिभाई अनि एकिकृत जनक्रान्तीमा आबद्ध हुनुभएका सम्पुर्ण क्रान्तिकारी साथीहरुलाई बिजयादशमीको शुभकामना ।
म अर्को सालको दशैमा घर आउने छु । मेरो कुनै फिकर नगर्नुहोला । म एकदम सन्चै छु । त्यहाँ तपाईंहरुको स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला ।
बिदुर नगरपालिका वडा न २
बट्टार, सङ्गमचोक ,नुवाकोट, हाल युएईवाट
२९ आश्विन २०७५, सोमबार को दिन प्रकाशित